Qarankan sidee loogu tallaagalay mustaqbalka, dhaw iyo ka foogbaa? Qoraal Macne Badan Leh,Weedho Dhaxal reebay oo Siyaasiyiin Waaweyn laga Guntay | Somalidiasporanews.com	Home
11:32 pm | Posted by Hargeysa Qarankan sidee loogu tallaagalay mustaqbalka, dhaw iyo ka foogbaa? Qoraal Macne Badan Leh,Weedho Dhaxal reebay oo Siyaasiyiin Waaweyn laga Guntay
Qoraal kooban oo macno wayn kujiro ayaan doonayaa inaan idin la wadaaggo akhyartaa siyaasadda danaysa siib kuwa kujira hadda, iyo kuwa ku hamiyayaa inay ka qayb galan mustaqbalka dalkan hooyo.
Siyaasadda waxa aan u aqaann rajo umaddu ay leedahay wakhtiga foog iyo ka dhaw baa. Marka aan eegnoo erey bixinta ay sameeyn hoggaamiyashii qaranka tubta u qabtay waxa ay yidhahaddeen sidaa tan
” Siyaasadda waxba lagama hello, se waxbaa lagu daraa” Cigaal
” Siyaasiga suubban sahaydiisu waa samir iyo dulqaad” siilanyo
” Qaranku waxa uu u baahan yahay nin qaddan karaa go’aanno geesinimo leh, se uma baahan nin aan go’aan gaadhi karrin” Faysal Cali waraabe
intaasi waa hordhacaa qoraalka waxa aan is waydiyay su’aalahan hoos ku qoraan.
1:Qarankan sidee loogu tallaagalay mustaqbalka, dhaw iyo ka foogbaa?
2:Marka aan eegnoo waxyaabo badan oo u Asaasi ah qaran mahaynaa?
3:Qarankan sidee dhidiibadda loogu adkayn karraa?
Soomaalilaand waxa ay ku timii qof walibaa waa ogyahay naf iyo maal baa loo huray guusha ka dib waxa la gurtay midhaha kasoo baxay naftood hurayaashii diiday caddaalad darradda iyo dhaqanxumadii dadkoodda laguulla dhaqmayay. Inta ka bacaddii dhallinta waxa la yidha mustaqbalkii dalka , iyo dadka ayaa tahiin se inta wax dhafsiisan looma ogollaa tababarka ay qabbaan waa ka ay dhigeenn kuwa ka horreeyay oo aan dariiq wanaagsan jeexiin waxa aan u baahan nahay tusaale fiican oo aan ku dayanno in aan hellnoo mustaqbalka se waxa aan Aamiinsanahay in wax la beddeli karo si kastooy ahaato wakhtiga soo socdaa sidaa madaxda la doorto oo noqon doonta maxad noo qabanaysa? marka aad xilka qabbaato sidee baad ka yeelaysa qabiilkan inna aa feyay si aan u hellnoo jiil wanaagsan oo tababaraa kuwa soo socdaa.
2: nabaddu waa furaha guusha nolosha oo dhan.
Nabaddu waa waxa aan ku faano ee aan Aduunwaynaha ka iibino iyo dimuqraadiyadda taasina waa horumar faacwayn leh oo aan cidna laga dibafidhisanin. Illaahayna naagu galaday in badan oo kilaafkeenna ka mid ahaan waxa lagu xaliyay wadahadalo nabdoon, is Afkarasho, iyo isku tanaasul qabiil, iyo mid siyaasiyaa, waxa aan lagu dhammeeyay walaaltinimo leh. Waxa jiray shaqaaqoyiin yaryar oo la dhammeeyay markiiba. Horre waxa loo yidhi
” Nabad baa naas la nuugo leh”
midhaha kasoo baxay Waxbarasho heerka aan marayno oo dhan nabad baa u hooyo ah.
~Ganacsato sarrahaa dhaadheer ee quruxda iyo biliciida dalka galiyay walow halka dhaliili ka jirto sidaa sicir bararka iyo waxa ay doonnaan oo ay sameeyaan ganacsataddu.
~Caafimaadka marka aan eegnoo wax fiican waa la qabtay, se wali waxba dhimaan dhinaca daawoyiinka oo bilaa tayo ah baa jiraa, qalabka caafimaadka oo liita awgeed weeye.
~Biyo yarraan caasimadda ka jirta waa dhaliil dawladda dhexe, ta hoose, iyo waliba haa’yaaddaha waxka caawiya ayay u tallaa sidaa wax looga qabbanayo biyo yarraan maddaama ay dadku kusoo badnayaan hargeysa. IWM.
3: Caddaaladda oo la ilaaliyo.
~Adeegyadda bulshadda oo loo sinnaaddo
~ Ciidankan kala duwan ee qaran oo laga dhiso cilmiga, qalabka, iyo Akhlaaqdaa ay kula dhaqmayaan dadka iyo maxbisiita aad hayaan.
~ Waddooyin ku waa qurux iyo sharaf marka lagu soo bookhdoo laguugu qiimayn karo mustaqbalka marka aad tagto waddan kale wafitii ka socdaa dalkeenna tagto amma ay inno yimaddan. Aan dhisno waddooyinka dalka oo dhan si aan u hellno dalxiisayaal iskaga goosha dalkeenna iyo kuwa jaarka.
QALINKII: IDIRIS MUXAMMAD MUXAMMUUD (idiris Tooxyare)